Ungarekhoda njani ukuThumela kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungarekhoda njani usasazo kwi-twitter?
Umsebenzisi we-Twitter unethuba lokuRekhoda Ukusasaza ngokuBukhoma kunye neHardware okanye iSoftware; Ngesi sizathu, kuya kufuneka ulandele le nkqubo: Kuqala, yiya kuqwalaselo lwesicelo sakho okanye kwiHardware.
Kanye kwisicelo sabo, uMsebenzisi uyaqhubeka nenkqubo: Khetha Ukuhanjiswa kweseva ngentando yakho; khetha i-Twitter kulukhetho olwehlayo ukuze uqinisekise ukuba ikhowudi kunye neakhawunti yakho ye-Twitter.
Ngena kwiakhawunti yakho ye-Twitter nge Igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha leAkhawunti ofuna ukuthumela kuyo ukuGqithisela kwaye wamkele iimvume. Emva koko, iqala ukuhambisa ividiyo kwinethiwekhi yoluntu iTwitter.
Yabelana ngokuSasaza ngokuBukhoma okanye ngokuDlala kwakhona kuTwitter
ukuba Yabelana ngoMsinga Phila okanye udlale kuTwitter, uMsebenzisi kufuneka alandele izikhokelo kunye neenkqubo ezikhoyo kwiqonga likaTwitter ukwenza isenzo esichaziweyo; Ngale ndlela, kufuneka:
Cofa kwi icon yokwabelana ebekwe kwi isikrini esigcweleyo Bukhoma ividiyo okanye udlale kwakhona; emva koko ukhethe enye yezi ndlela unokukhetha kuzo: Cofa kwi-Live Share (xa ibikhona).
O Yabelana kwasekuqaleni (xa usebenzisa imowudi yokuPhinda); Cofa apha Yabelana ukusuka ukuya kuTwitter, thumela ngomyalezo othe ngqo okanye ukope ikhonkco leVidiyo ebukhoma okanye uPhindaphinde ukusuka kumzuzu uMsebenzisi awukhethileyo kwibar yokukhetha.
NQANDA UMNTU EKUJONGENI NAKUPHENDULA KWIVIDIYO YAM EBukhoma KWI-TWITTER
Umsebenzisi unethuba lokuThintela umntu Jonga kwaye uphawule iVidiyo yakho Phila kuTwitter; Enye yeendlela kukuthintela loo mntu ukuba angenzi nto ngeVidiyo yakho ebukhoma.
Ukuthintela umntu, uMsebenzisi kufuneka: Cofa apha Izimvo zakho, khetha iProfayili yakho, cofa kwiGear, khetha iBlock yomsebenzisi. Iakhawunti yomnye umntu ayisayi kuphinda isebenzisane neeVidiyo zakho eziBukhoma kwaye iya kuvalwa kwi-Twitter.
Umsebenzisi njengombukeli unakho Xela izimvo ocinga ukuba ikhubekisa kwaye ikwenza gadalala. Ukwenza oku, khetha uluvo kwaye ucofe iNgxelo yengxelo. Ngesi senzo, awusayi kuphinda ujonge imiyalezo yomnye umntu eseleyo kuMsinga oBukhoma.
Umxholo awuvumelekanga kwiiVidiyo eziBukhoma
Imigaqo kunye nemigaqo-nkqubo ye-Twitter ibeka imixholo ayivumelekanga kwiiVidiyo eziBukhoma, ezinje nge: Iividiyo eziqulathe ubundlobongela obubonakalayo, umxholo wabantu abadala okanye imifanekiso enenzondo eyaphula uxolo nentlalo-ntle yabasebenzisi noluntu.
Nayiphi na ividiyo ebukhoma epapashwa ngenjongo khuthaza ubutshaba phakathi kwabantu ngenxa yezizathu zobuhlanga, inkolo, ukukhubazeka, ukuthanda isini, imvelaphi yobuhlanga, ubuzwe, njl.
I-Twitter inayo ukunyamezelana okungathethekiyo neeVidiyo eziBukhoma okanye ezinye iimpapasho ezibonisa umxholo kunye nemifanekiso ebandakanya ukuphathwa gadalala kwalo naluphi na uhlobo lwabantwana, abafikisayo kunye nabantu abancinci; Kunye nezilwanyana ezixhatshaziweyo nezicukucekileyo.
1 Yabelana ngokuSasaza ngokuBukhoma okanye ngokuDlala kwakhona kuTwitter
2 NQANDA UMNTU EKUJONGENI NAKUPHENDULA KWIVIDIYO YAM EBukhoma KWI-TWITTER
3 Umxholo awuvumelekanga kwiiVidiyo eziBukhoma
Ungayicima njani iakhawunti yam kwiwebhu ye-twitter?
Ngaba ukhuseleko lweakhawunti yam lonakaliswe kwi-twitter?